देवदहमा बौद्ध विश्वविद्यालयको डीन कार्यालय सञ्चालनमा – Nepal Press
देवदहमा बौद्ध विश्वविद्यालयको डीन कार्यालय सञ्चालनमा
२०७७ फागुन २१ गते १६:१४
रुपन्देही । देवदहमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको डीन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि तीन वटा देवदहबाट सञ्चालन गर्ने योजनासहित डीन कार्यालय खोलेको हो ।
सरकारले विश्वविद्यालयका लागि देवदहमा करिव ९० विगाहा जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोही जग्गामा पूर्वाधार निर्माणको काम समेत थालनी प्रक्रियामा पुगेको छ । शुक्रबार स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एण्ड एप्लाइड साइन्सको डीन कार्यालय देवदहमा खुलेको हो ।
देवदहमा विश्वविद्यालयले नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार विहान एक कार्यक्रमकाबीच डीन कार्यालयको उद्घाटन र नयाँ पूर्वाधार निर्माण स्थलको अवलोकन गरेका छन् ।
सो अवसरमा बोल्दै पौडेलले बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरमा चिनिने बनाउनुपर्ने बताए । ‘बौद्ध क्षेत्र, शिक्षामा अनुसन्धानसहित बहुविषयमा यसलाई विश्वस्तरमा चिनिने विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालको विकासका लागि सरकारले लगानी गर्ने उनले विश्वास दिलाए । देवदहमा करिव सय विगाहा जमिन प्राप्तीले समग्र क्षेत्रको विकासमा उचाई पुगेको पौडेलको भनाई छ ।
विश्वविद्यालयको पूर्वाधार र सडक पूर्वाधार एकैसाथ निर्माण गर्दै यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रकै रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पौडेलले बताए । देवदहको विकासका लागि सरकारका सकारात्मक रहेको भन्दै आवश्यक योजना बनाएर ल्याउन समेत उनले आग्रह गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सांसद छबिलाल विश्वकर्माले निकै मेहनतले देवदहमा विश्वविद्यालयले जग्गा प्राप्ती गरेको भन्दै अव यसको पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ‘यो हजारौं विद्यार्थीले भरिएको विश्वविद्यालय बन्नेछ, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै दीर्घकालका लागि महत्व राख्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले बौद्ध विश्वविद्यालयले देवदहको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरे ।सो अवसरमा प्रदेश सांसद कृष्ण न्यौपाने, देवदह नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, कांग्रेसका नेता बासु रिमालले बोल्दै बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वाधार छिट्टै निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
विश्वविद्यालयले चालु शैक्षिक सत्रबाट देवदहमा तीन वटा विषयको पठनपाठन गरेको उपकुलपति डा. हृदयरत्न बज्राचार्यले जानकारी दिए । एग्रो फोरेष्ट्र, इन्भाइरन्मेन्ट र डेभलपमेन्ट स्टडिजका स्नातकोत्तर कक्षा देवदहमा शुरु भएका हुन् ।
बुटवल र लुम्बिनीमा पठनपाठन गराइरहेको विश्वविद्यालयले बुटवलमा पनि डीन कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लो विश्वविद्यालय सभाले डीन कार्यालयसहितको आंगिक क्याम्पस बुटवलमा खोल्ने निर्णय गरेको र त्यसको पुर्वाधार नयाँगाउँमा बन्ने विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले जानकारी दिए ।
‘लुम्बिनी, तिलौराकोट र देवदहसहितका बौद्ध स्थलमा बुद्ध दर्शनका पठनपाठन गर्ने योजना बनाएका छौं, अव यसले छिट्टै मूर्त रुप पाउनेछ,’ उनले भने ।एग्रो फोरेष्ट्र, इन्भाइरन्मेन्ट र डेभलपमेन्ट स्टडिज नयाँ खुलेका विषय हुने ।
यो संकायका डीन उकेशराज भुजुले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्दै आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्धेश्य यी पाठ्यक्रमको रहेको बताए । यो प्रयोगात्मक सहितको कक्षा सञ्चालन हुने विषय हुन । देवदहमा तपोवन सहितको पूर्वाधार निर्माण हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २०७७ फागुन २१ गते १६:१४
चिकित्सा शिक्षाका कर्मचारी सन्ततिलाई आरक्षण दिन संसदीय समितिको निर्देशन (भिडिओ)
बुटवलका मेयर कुटेका पंगेनी धरौटीमा रिहा
‘लैगिंक हिंसा निवारण कोष’ परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन
ज्योतिनगरको पहिरो व्यवस्थापनमा लुम्बिनी सरकारको चासो, तीन चरणका कार्ययोजना बनाइने
विद्युत सर्ट हुँदा कपडा पसलमा आगलागी, करोडौंको क्षति
पोखरा घुमेपछि विदेशी कूटनीतिज्ञ भन्छन् : सौन्दर्य लोभलाग्दो !
विश्व रेबिज दिवस: बेलैमा सावधानी नअपनाउँदा हुन सक्छ मृत्यु (भिडिओ)
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत योजना आवश्यकः उपेन्द्र यादव
बुद्ध एयरको जहाजमा बारम्बार समस्या, सेकेन्डह्यान्डले दियो सास्ती
गैंडा मारेर खाग तस्करी गर्ने गिरोह पक्राउ, दाजुभाइदेखि नातेदारसम्म संलग्न
ओलीको प्रश्न: एउटै क्लास दोहोर्‍याउँदिन भनेको हो, तर क्लास सकिएपछि के गर्ने ?
कन्हैया कुमार भारतीय कांग्रेस प्रवेश, सत्तारुढ बीजेपीले देश बिगारेको आरोप
कपनबाट चार वर्षिय भारतीय बालक हराए, छिमेकीले अपहरण गरेको आशंका
दुई वर्षपछि सुटिङ सेटमा फर्किइन् साम्राज्ञी, खुशी हुँदै पोस्ट गरिन् हट तस्बिर
वर्षमान फेरि अस्वस्थ, भएको के हो ?
माओवादी छाडेको ४ वर्षमा कांग्रेसको गाउँपालिका सभापतिमा सर्वसम्मत !